Basa rekurodha mimhanzi kubva kuSpotify paApple Watch rinotanga kubuda | Ndinobva mac
Basa rekurodha mimhanzi kubva kuSpotify paApple Watch rinotanga kubuda
Kwekupedzisira May, Spotify akazivisa kuti yakanga ichishanda kupa mukana we tora nziyo paApple Watch saka icho kubhadhara vashandisi vanogona kuteerera kumimhanzi yavo yavanofarira pasina kudikanwa kwekubatanidzwa kwedata. Sezvakataurwa kubva Gadgets uye Wearables, vashandisi vanoverengeka vatanga kugamuchira chinhu ichi.
Sezvineiwo, huwandu hwevashandisi vatanga kunakidzwa nebasa rakamirirwa kwenguva refu iri kukura, saka zvinonyanya kuitika kuti muvhiki ino, kana iwe uri mushandisi anobhadhara wepano kutenderera mumhanzi chikuva, iwe unogona zvakare kutanga kuishandisa.
Ichi chiitiko chitsva ikozvino yave kuwanikwa kune hombe vashandisi kubva kuUnited States, Germany, Austria, United Arab Emirates, Brazil, Italy, Norway, Switzerland, Ireland, Netherlands, Malaysia, Portugal, Canada neUnited Kingdom, pakati pedzimwe nyika, basa rinoitwa mushure mekugamuchira nyowani nyowani yeapp.
Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti Spotify iri kuburitsa zvishoma nezvishoma basa iri kuti rione kana richishanda nemazvo uye nokudaro richikwanisa kugadzirisa chero matambudziko risati rasvika pasi rose. Iyo vhezheni yeSpotify iyo inokutendera iwe kurodha nziyo dzekutamba usina kubatanidza internet iri nhamba 8.6.40.1248.
Kana iyi isiri iyo yazvino vhezheni iwe unayo yekushandisa, tarisa kuApp Store Ngatione, kana tichitarisira, iyo vhezheni itsva yatowanikwa munyika yako.
Zvinoenderana nevakomana kubva kuGadget uye Wearables, kuti utore nziyo paApple Watch, unofanirwa kudzvanya pamapoinzi matatu kurudyi kwenziyo yega yega uye sarudza Dhawunirodha pane ichi chishandiso. Pasi pazasi ndiyo Download nzira pane iyo Apple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Basa rekurodha mimhanzi kubva kuSpotify paApple Watch rinotanga kubuda
Dzivirira Jacob aripo paDVD neBlu-Ray
Apple iri kufunga kutenga Iyo Morning Show kambani yekugadzira